China The peeling and rotating roller ထုတ်လုပ်သူနှင့် ရောင်းချသူများ |Chens-တင်ပေးလိုက်
ဤစက်သည် ကောက်ရိုးတံ၊ ဂရစ်ဘား၊ ခုံးပြား၊ ပန်ကာ၊ တိကျသော ဆွဲငင်အားခွဲထုတ်ခြင်းနှင့် ဆင့်ပွားလွှင့်ထူစသည့် အစိတ်အပိုင်းများစွာဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး ရိုးရှင်းပြီး ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဖွဲ့စည်းပုံ၊ လည်ပတ်ရလွယ်ကူမှု၊ တည်ငြိမ်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော စွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ရန်
မြေပဲများကို ကိုယ်တိုင်ကျွေးပြီး ကြမ်းတမ်းသော ဇယားကွက်ထဲသို့ ကျရောက်သည်။ပုံသေဇယားကွက်၏ လှည့်ပတ်မှုနှင့် အဝိုက်အပြားကြားရှိ ပွတ်တိုက်တွန်းအားကြောင့် မြေပဲစေ့ခွံများကို အခွံခွာပြီး ခွဲထုတ်ပြီးနောက် မြေပဲခွံများကို ဇယားကွက်အတွင်း တစ်ပြိုင်နက် ပြုတ်ကျကာ လေဖြတ်သွားကာ လေတိုက်ခြင်း၊ မြေပဲခွံအများစုသည် စက်မှထွက်၍ မြေပဲစေ့များနှင့် အခွံမခွာသေးသော မြေပဲများ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသည် သီးခြားဆွဲငင်အားခွဲထုတ်သည့် ဆန်ခါတွင် အတူတကွ ကျရောက်သည်။အပြင်းအထန် စိစစ်ပြီးနောက် မြေပဲစေ့များသည် ခွဲထုတ်ထားသော ဆန်ခါမှတဆင့် သွားကာ အစာအဖွင့်မှတဆင့် အိတ်ထဲသို့ စီးဆင်းသွားပါသည်။အခွံမခွာထားသော မြေပဲများ (အသီးအနှံငယ်များ) သည် ဆန်ခါမျက်နှာပြင်မှ ဆင်းသွားကာ ဓာတ်လှေကားအတွင်းသို့ စီးဝင်ကာ ဆင့်ပွားအခွံခွာရန်အတွက် ဓာတ်လှေကားဖြင့် အစေ့အဆံများကို ဇယားကွက်သို့ ပေးပို့ကာ တိကျသော ဆွဲငင်အားဖြင့် ပိုင်းခြားထားသည်။တက်မှုအပေါင်း အောင်မြင်ပါစေ။
1. အခွံခွာခြင်းနှင့် လှည့်ခြင်း roller သည် သစ်သားဒလိမ့်တုံးဖြင့် အခြောက်လှန်ခြင်း နှင့် လျှပ်စစ်ဆန်ခါခြင်းနှင့် မျိုးစေ့ရွေးချယ်ခြင်း နိယာမကို လက်ခံပါသည်။
2. တင်သွင်းလာသော ထင်းများကို အခွံခွာခြင်းနှင့် လှိမ့်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုပြီး အစေ့ကွဲထွက်နှုန်း အလွန်နည်းပါးပြီး အပြင်ခွံကို သံပြားမှုန့်ဖြန်းခြင်းနည်းပညာဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် လှပပြီး တာရှည်ခံပါသည်။
3. မော်တာဗို့အားသည် 220V ဖြစ်ပြီး ပါဝါမှာ 2.2KW ဖြစ်သည်။ကြေးနီဝိုင်ယာမော်တာအသစ်သည် သက်တမ်းပိုရှည်သည်။
4. အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော လေမှုတ်စက်တွင် အစေ့အဆန်နှင့် အခွံကို ထိထိရောက်ရောက် ခွဲထုတ်နိုင်ပြီး မျိုးစေ့၏ ပြန်လည်ရယူနှုန်းကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးသည့် အလယ်အလတ်လေနှင့် တူညီသောလေဖြန့်ဖြူးမှုပါရှိသည်။
5. အခွံခွာစက်တွင် universal wheels များ တပ်ဆင်ထားပြီး ရွှေ့ရအဆင်ပြေသည့် ထူးခြားသော ဘေးဘက်တွင် တပ်ဆင်ထားသော ဒီဇိုင်းကို လက်ခံပါသည်။
6. သေးငယ်သောအရွယ်အစားနှင့်အဆင်ပြေ။အခွံခွာနှုန်းသည် တစ်နာရီလျှင် 800-900 jin (မြေပဲ) သို့ရောက်ရှိနိုင်ပြီး အခွံခွာနှုန်းမှာ 98 အထက်ဖြစ်သည်။
7. စက်တစ်ခုစီတွင် အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသော မြေပဲများကို အခွံခွာရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်သည့် ဆန်ခါသုံးလုံး တပ်ဆင်ထားပါသည်။
နောက်တစ်ခု: အဆင့်မြင့် ဒီဇိုင်းဖြင့် ဘက်စုံသုံး ခြွေလှေ့စက်
12PJS စီးရီး နက်နဲချောင်ချိ...
12PJZ စီးရီး Self-balancing...
1BZ စီးရီး ဟိုက်ဒရောလစ် အော့ဖ်ဆက်...